Oregon study: Somali - The Goldsen Institute
This page has been translated from English into: Somali (soomaali)
Ma waxaad tahay LGBTQ+ (gabdhaha jecel gabdhaha kale, ragga jecel ragga kale, kuwa labbada jinsiba jecel ‘bisexual’, qof bedeshay jinsiga ‘trans’, jinsi aan caadi ahayn ‘queer’, Qof Laba Ruuxle ah ‘Two Spirit’, qof weyn oo aan jinsiyad gaar ah lahayn ‘non-binary’, iyo galmo iyo jinsi kala duwan leh) oo da’diisu tahay 55 jir ama ka weyn tahay oo ku nool Oregon?
Waxaan u baahanahay caawimaadaada la xiriirta mashruuca hal-abuurka cusub leh, Ra’yi ururinta Dadka Waa-Weyn ee ah LGBTQ+ ee Oregon, waxaa maalgelisay Waaxda Adeegyada Dadweynaha Oregon Xafiiskeeda Dadka Waayeelka iyo Naafada ah (APD), oo iskaashi la yeelanaysa hay’adaha iyo ururada u adeega LGBTQ+ iyo dadka Laba Ruuxlaha ah ‘Two Spirit’ ee reer Oregon. Hadafka aan leenahay waa in aanu ururino macluumaad si kor loogu qaado qorsheynta, horumarinta barnaamijka, iyo waxbarashada bulshada iyo u doodista si wax looga qabto adeega, baahiyaha dadka waayeelka ah iyo caafimaadka ee lagu taageero awoodaha LGBTQ+ iyo dadka Laba Ruuxlaha ah ‘Two Spirit’ ee waaweyn ee ku nool Oregon.
Waxaad u qalantaa bakhtiyaanasiib la is guddoonsiinayo Shahaadooyin Hadiyad ah oo dhan $100 oo la siinayo shan qof oo si aan kala sooc lahayn loo soo xushay. Fadlad maskaxda ku hay in ka qayb qaadashadaada mashruucu yahay mid dhammaantiiba ikhtiyaari ah.
Wixii macluumaad dheeraad ah, nagala soo xiriir OregonSurvey@uw.edu ama 1-888-643-4498.
Hawl-wadaagayaasha bulshada oo ay ku jiraan AARP, Aging Well Program of Cascade AIDS Project, Alzheimer’s Association, Governor’s Commission on Senior Services, HIV Alliance – Douglas County, LGBTQ+ Aging Coalition, Oregon Home Care Commission, Pride Foundation, Quest Center for Integrative Health, EngAGE NW, Metropolitan Community Church of Portland, Zami Nobla Oregon, iyo SAGE Metro Portland.
Gacan ka geyso sii gudbinta hadalka si aan mashruucani uga dhigno mid guuleysta!